सवारी चलाउँदा फोनमा कुरा गरे ६ महिना लाइसेन्स निलम्बन ! | Jwala Sandesh
सवारी चलाउँदा फोनमा कुरा गरे ६ महिना लाइसेन्स निलम्बन !
| प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ २७, २०७३ ::: 308 पटक पढिएको |
२७ भदौ, काठमाडौं । तपाईं गाडी वा मोटरसाइकल चलाउँदा फोनमा कुराकानी गर्नुहुन्छ ? अब सचेत रहनुहोला ।
सरकारले फोनमा कुरा गर्दै सवारी चलाउने चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने प्रवधानसहितको नयाँ नियम ल्याउँदैछ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा सवारी चलाउँदा फोनमा कुरा गरेको पाइएमा ६ महिनासम्म लाइसेन्स निलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
लाइसेन्स निलम्बनको अवधिमा सवारी चलाउन अनुमति हुनेछैन । निलम्बनको अवस्थामा सवारी चलाएमा लाइसेन्स नभएको अवस्था सरह नै हुने कारवाही भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
नयाँ व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव आइतबार मात्रै यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयमार्फत यो संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश हुनेछ । संसदले परित गरेपछि यो लागू हुनेछ ।
प्रस्तावित नियम अनुसार मादक पदार्थ सेवन (मापसे)को कारवाहीलाई पनि कडा बनाइएको छ । एक पटकभन्दा बढी मापसेको कारवाहीमा परे ६ महिना लाइसेन्स निलम्बन हुनेछ ।
मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनलाई अहिले पाँचपटकसम्म मौका दिइन्छ । अब भने एकपटक भन्दा बढी मापसेको कारवाहीमा पर्ने चालकले ६ महिना सवारी चलाउन पाउने छैनन् ।
संशोधन प्रस्तावमा यात्रुबाहक सवारीले ब्लु-बुकमा लेखिएको भन्दा बढी यात्रु बोकेमा ६ महिनाका लागि लाइसेन्स निलम्बन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अब सार्वजनिक सवारीदेखि मोटरसाइकल तथा निजी सवारीले सिट क्षमताभन्दा यात्रु बोकेमा यो कारबाही हुनेछ ।
साथै यात्रु बोक्ने जुनसुकै सवारीले यात्रुको झिटीगुण्टाबाहेक मालसमानहरु बोकेमा पनि चालकको अनुमतिपत्रलाई निलम्बन गरिने भएको छ । यो व्यवस्थाले सार्वजनिक सवारीमा मालसामान लोड गरेर बोक्ने प्रचलनको अन्त्य हुने विभागको विश्वास छ ।
सार्वजनिक सवारीले रुट इजाजत भन्दा बाहेकका बाटोमा गाडी चलाएपनि यही कारवाही गर्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । निजी सवारीले भाडाका यात्रु बोकेको भेटिएमा पनि चालकलाई ६ महिनासम्म सवारी चलाउन अनुमति दिइने छैन ।
यतिमात्रै होइन लापरवाहीका कारण सवारी दुर्घटना भएर यात्रुको मृत्यु वा अंगभंग भएमा चालकको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ ।
चालकको लापरवाही देखिएका दुर्घटनामा उन्मुक्ति नदिइने विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । दुर्घटनामा दोषी देखिएका चालकले फेरि लाइसेन्स बनाउन पाउने छैनन् ।